२०७७ मंसिर १३ गते शनिबार | eAdarsha.com
२०७७ मंसिर १३ गते शनिबार
व्यवसायबाट मनग्य नाफा कमाउन सकिनेछ । आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । ठूला व्यक्तिको संगत गर्न पाइनेछ । पढाइमा रुचि बढ्नेछ ।
शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । आम्दानी भन्दा खर्चभार बढी हुँदा आर्थिक तालमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ । गोपनीयता बाहिरीँदा समस्यामा परिन सक्छ, सजक रहनु होला । व्यर्थको कार्यमा समय वित्ने देखिन्छ ।
मांगलिक कार्यको निम्तो पाइनेछ । आय मूलक कार्यमा ध्यान जानेछ । नयाँ–नयाँ प्रस्तावहरु आउने छन् । अघिदेखि रोकिएका वित्तीय कारोवारलाई अघि बढाउन सकिनेछ । गरेका कार्य सफल बन्दा हर्ष बढ्नेछ ।
प्रतिक्षित नतिजामा सफलता मिल्नेछ । सहज वातावरण बन्नेछ । नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । मान्यजनको सहयोगले असंभव कार्य पनि सहज तवरले बन्नेछन् । प्रशासनिक कार्य सजिलै बन्नेछन् ।
सानातिना समस्यामा नआत्तिनु होला । बुद्धिमता ढंगले अघि बढ्दा सफल भइनेछ । आध्यात्मिक चिन्तन रहनेछ । परोपकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लाग्नेछ । व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ मिल्ने समय रहेको छ ।
पारिवारिक समस्याले गर्दा कार्य गर्ने वातावरण बन्नेछैन । अनावश्यक चिन्ता बढ्नेछ । क्षणिक फाइदालाई हेर्दा महत्वपूर्ण अवसर फुत्कनेछ । कडा परिश्रमका बापजुध पनि न्यून उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ ।
आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ । माया–प्रेमको बन्धन कसिलो बन्नेछ । अरु व्यक्तिलाई विश्वास दिलाउन सक्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइनेछ । काम गर्ने शैलीको प्रशंसा हुनेछ । मानसिक शान्तिको अनुभव हुनेछ ।
दोधारेपनले गर्दा निर्णय लिन गा¥हो पर्न सक्छ, गुरुजन वा अग्रजको सहयोग लिनुहोला । आर्थिक पक्षमा भने सुधारको संकेत देखिन्छ । शत्रू पक्ष कमजोर रहँदा कार्य गर्न सहज हुनेछ । नयाँ सीप सिकिनेछ ।
सोच्न सक्ने क्षमताको कदर हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा मन जानेछ । पारिवारिक सरसहयोगले कार्य गर्न सहज हुनेछ । टाढिएका आफन्तजनसँग मिलन हुनेछ । नजिकका व्यक्तिसँग मिष्ठान्न भोजनको योग बनेको छ ।
आफ्नै निर्णयले आफैलाई समस्यामा पार्न सक्छ, सोचेर निर्णय लिनु होला । स्थानान्तरणको समस्याले सताउनेछ । घरायसी समस्या सृजना हुनेछ । विना तयारी कार्यमा लाग्दा अन्योलको वातावरण बन्नेछ ।
मन मिल्ने व्यक्तिसँगको आकस्मिक रमाइलो भेटघाट हुनेछ । सहयोगीहरुको उचित रुपमा साथ मिल्दा थालेका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक लगानीको अवसर मिल्नेछ । गरेका कार्यबाट दिगो रुपमा लाभ पाइनेछ ।
सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नेछ । घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ । धन सञ्चय गर्न मन लाग्नेछ । विशिष्ट समारोहमा मानसम्मान मिल्नेछ । बोलिकै भरमा ठूूूला कार्य बन्नेछन् ।
वि.सं. २०७७ साल मंसिर १३ गते शनिबार, तदनुसार ई.सं. २०२० नोभेम्बर २८ तारिख, प्रमादीनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, हेमन्तऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथि पूर्वान्ह १०ः३२ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ ।
नक्षत्र भरणी मध्यरात्रि पछि ४ः१० बजेसम्म, त्यसपछि कृत्तिका रहनेछ ।
विष्कुंभादी योग वरीयान् पूर्वान्ह ११ः११ बजेसम्म, त्यसपछि परिघ रहनेछ ।
करण गर वेलुका ११ः३७ बजेसम्म, त्यसपछि भद्रा रहनेछ ।
श्रीसूर्य बृश्चिक राशिमा, चन्द्रमा : मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ ।
सूर्योदय ६ः३६ बजे, सूर्यास्त : बेलुका ५ः०६ बजे ।